Skrola i-Arduino, i-IDE yabasebenzisi be-novice Arduino kakhulu | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ukuhlelwa kwamabhodi wamahhala kuya ngemfashini futhi akumangazi ngoba amabhodi afana ne-Raspberry Pi noma i-Arduino asezithengeka kakhulu. Ama-tutorials nama-video tutorials nawo ayabiza kakhulu futhi kuthatha amahora ambalwa nje ukufunda izisekelo ze-Programming. Kungenxa yalokho kunezinhlelo eziningi ezizama ukusiza ukudala izinhlelo ezithile ze-Arduino noma i-Raspberry Pi. Ngisho nezinhlelo ezifakiwe ngaphakathi kwalawa madivayisi ukudala ezinye izinhlelo, zeRaspberry Pi sinezibonelo eziningi.
Olunye lwezinhlelo ezidume kakhulu noma isoftware ehlobene ne-Arduino yi- Scratch for Arduino, isoftware eqondiswe kubasebenzisi be-novice ezosisiza ukuthi sakhe izinhlelo zamahhala ukuze amaphrojekthi wethu we-Arduino asebenze kahle.
1 Yini iScratch ye-Arduino?
2 Ungayifaka kanjani iScratch ye-Arduino?
3 Yimaphi amabhodi ahambisana ne-SfA?
4 Scratch for Arduino noma Arduino IDE?
Yini iScratch ye-Arduino?
Kepha okokuqala kufanele sisho ukuthi yi-Scratch ye-Arduino. IScratch ye-Arduino wuhlelo lwe-IDE olwenzelwe abasebenzisi be-novice. Ithuluzi le-Programming elenza ukwenziwa kwekhodi, ukuhlanganiswa kwayo nokwenza kwayo ngesikhathi sangempela. Isoftware isuselwa kuhlelo lokusebenza lwezingane oludumile olubizwa ngeScratch. Lolu hlelo lokusebenza luyasesha ukufundiswa koHlelo phakathi kwabancane ngenxa yamabhulokhi nohlelo olubukwayo olusiza abancane ukuthi bathuthukise amakhono abo anengqondo kakhulu. Umqondo weScratch for Arduino ukusebenzisa izinhlelo ezibukwayo nokuvimba izinhlelo ukuze noma yimuphi umsebenzisi, kungakhathalekile ukuthi unezinga elingakanani lohlelo, akwazi ukudala uhlelo lwe-Arduino.
IScratch ye-Arduino ayinabo ubudlelwano nanoma yini ngeScratch noma nephrojekthi ye-Arduino, kepha-ke, njengoba kungamaphrojekthi wamahhala, okuhamba phambili kwephrojekthi ngayinye kuthathiwe ukuze umsebenzisi wokugcina asebenzise ibhodi nesoftware yabo ye-Arduino. Yize kufanele sisho ukuthi la maphrojekthi amathathu awaxhumani. Okusho ukuthi, i-Scratch ayinayo inketho eba yi-Scratch ye-Arduino futhi i-Arduino IDE ayivumeli uhlelo olubonakalayo nge-plugin ebizwa nge-Scratch for Arduino. IScratch yisoftware ezimele futhi IScratch ye-Arduino wuhlelo oluzimele lwe-multiplatform okuthi, njenge-Arduino IDE, iqukethe abashayeli bamabhodi athile e-Arduino wokuxhumana..
Ngenxa Yomphakathi, iScratch ye-Arduino inayo isicelo se-Android esivumela kuphela i-smartphone ukuxhumana nohlelo, kepha futhi singahlola isoftware eyenziwe ngokusebenzisa umthetho olandelwayo we-HTTP.
Ungayifaka kanjani iScratch ye-Arduino?
Uhlelo lweScratch for Arduino luyatholakala kumapulatifomu ahlukahlukene, okungenani amapulatifomu athandwa kakhulu anabasebenzisi abaningi: singayifaka ku-Windows, kwi-MacOS, ye-Gnu / Linux ngisho nokusabalalisa kwe-Raspberry Pi, ngakho-ke singaba nalolu hlelo kunoma iyiphi ikhompyutha esiyisebenzisayo.
Kepha okokuqala, kufanele sithole uhlelo ukulifaka kukhompyutha yethu. Vuliwe iwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi singathola izinhlelo zazo zonke izinhlelo ezisebenzayo.
Uma sisebenzisa iWindows, kufanele sichofoze kabili kuphakheji elandiwe bese landela iwizadi yokufaka lapho kuzodingeka ukuthi ngokuqhubekayo sicindezele inkinobho "elandelayo" noma "elandelayo".
Uma usebenzisa i-macOS, inqubo iyafana noma iyafana. Kepha ngaphambi kokuchofoza kabili kwiphakeji esiyilandile, kufanele siye kulungiselelo lwe-MacOS futhi siqiniseke ukuthi uhlelo olusebenzayo luvumela ukufakwa kwezinhlelo ezingenazo izimvume. Uma sesikwenzile lokhu, sivula iphakethe lesicelo bese sihudulela uhlelo lokusebenza kufolda yezicelo.
Uma sisebenzisa iGnu / Linux, lapho-ke kufanele qala ngokulanda iphakheji elihambelana nengxenyekazi yethuKulokhu, ngeke kube ngamapulatifomu angama-64-bit noma ama-32-bit kepha uma ukusatshalaliswa kwethu kusebenzisa amaphakheji we-debian noma amaphakheji we-Fedora, okungukuthi, i-deb noma i-rpm. Lapho sesilande iphakheji ehambelana nokusatshalaliswa kwethu kufanele sivule ukuphela kwifolda, okwenziwa ngokuchofoza kwesokudla esikhaleni sefolda bese senza okulandelayo esigungwini:
Noma singayifaka nangokuthayipha okulandelayo:
Ngemuva kwemizuzwana embalwa sifaka uhlelo, sizoba nesithonjana kumenyu yethu esizobizwa ngeScratch for Arduino. Njengoba ukwazi ukubona, ukufakwa kwale IDE ebonakalayo kulula kakhulu futhi ngokuvamile akudingi noma yiluphi uhlelo lwangaphandle ukuze lusebenze kahle.
Yimaphi amabhodi ahambisana ne-SfA?
Ngeshwa akuwona wonke amabhodi we-Arduino Project ahambisana ne-Scratch ye-Arduino. Okwesikhashana ziyahambisana kuphela Arduino UNO, Arduino Diecimila no-Arduino Duemilanove. Amanye amabhodi awahambisani nohlelo kepha akusho ukuthi ngeke akwazi ukusebenzisa ikhodi esiyakhayo, okungukuthi, ikhodi esiyakhayo ingathunyelwa kwenye i-IDE ukuze ihlanganiswe futhi yenziwe. NjengoScratch, I-SfA ingathumela ikhodi ku-IDE efana ne-Arduino IDE bese ithumela uhlelo kwamanye amabhodi weProjekthi ahambisana ne-Arduino IDE nokuthi bangasebenza kahle ngaphandle kokuthi bancike ekutheni ukuthunyelwa kwenziwa ngeScratch for Arduino noma cha.
Ngokuphathelene nekhodi, ngeshwa ngezinkinga zokulayisense, amafayela awaqondisi i-omni, okungukuthi, amafayili weScratch abonwa yiScratch ye-Arduino kepha lawo alolu hlelo awahambelani ne-Scratch. Noma kunjalo ikhodi eyenziwe yizinhlelo zombili iyahambisana ne-Arduino IDE. Le nkinga yinto ezonyamalala ngokuhamba kwesikhathi nangeminikelo yoMphakathi, kepha okwamanje ayinakwenziwa.
Scratch for Arduino noma Arduino IDE?
Ngalesi sikhathi, ngokuqinisekile uzozibuza ukuthi yini engcono ukuhlelela i-Arduino Scratch for Arduino noma Arduino IDE? Umbuzo obucayi ongaphendulwa ngomqondo omncane uma sazi ukuthi liyini izinga lethu lohlelo. IScratch ye-Arduino iyi-IDE eyenzelwe abasebenzisi be-novice kakhulu nabasebenzisi abancane ezisizwa yinto ebonakalayo yezinhlelo ze-block, into efana nalokho okubizwa ngokuthi yi-semi-programming. Ngenkathi i-Arduino IDE iyi-IDE yochwepheshe nabahleli bezinga eliphakathi abangadingi isici sokubuka ukuze bahlele kahle. Y uma lolu hlelo olwengane noma lwentsha, kuyacaca ukuthi iScratch for Arduino wuhlelo olufanele.
Kepha, uma sineqembu elinamandla, ikhompyutha yedeskithophu ibinganela, kungcono ukuba nazo zombili izixazululo. Njengoba sishilo ngaphambili, iScratch for Arduino ingasisiza ngokwakha amabhulokhi futhi i-Arduino IDE ingasisiza ekuthumeleni uhlelo kumabhodi ahlukahlukene, kungaba avela ku-Arduino noma kwamanye amaphrojekthi asebenza ne-Arduino IDE. Kepha, noma kunjalo, ukukhetha kungokwakho Ukhetha muphi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Hlwaya i-Arduino, i-IDE yabasebenzisi be-novice Arduino